ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက် Vivo X50 Pro ကင်မရာကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ gimbal တစ်ခုပါ Androidsis
Vivo X50 Pro ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကင်မရာတည်ငြိမ်မှုသည်ဤနည်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်
Nerea Pereira | | တရုတ် Android
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းများ၏ဓာတ်ပုံအပိုင်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ပြီးနောက် Vivo X50 Pro ကင်မရာ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြန့်ချီမှုကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကနွေးနေခဲ့သည်။ ၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးထပ်ကိန်း? အနောက်ကင်မရာကတော့ gimbal တစ်ခုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖမ်းယူနိုင်မည့်ထိုတည်ငြိမ်မှုစနစ်များအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားမြင်တဲ့အချိန်မှာ၊ Vivo X50 Pro ကင်မရာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည် နောက်ကျောကတည်ရှိပြီး, သင် hallucinate သွားကြသည်။
Vivo X50 Pro ၏ကင်မရာသည် gimbal တစ်ခုဖြစ်သည်
အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အတူဗီဒီယိုတွေပိုပိုပြီးမှတ်တမ်းတင်နေတာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အလယ်အလတ်တန်းစား terminal ကတကယ်ရလဒ်ကောင်းတွေရလို့ပါ။ ပြီးတော့ Vivo ရဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့စက်မှုလုပ်ငန်းမတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်မှာအမှတ်အသားပြုဖို့အရည်အသွေးမြင့်တက်သွားမှာပါ။ အကြောင်းပြချက်? သူတို့က၏၏ခြေရာခံစနစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစည်းပါပြီ gimbals ရိုးရာ။
ဤနည်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသည်ဇွန်လ ၁ ရက်တွင်စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်သည့် Vivo X50 Pro မှရင်ဘတ်ကိုထုတ်ယူချင်သည်။ ထို့အပြင်တည်ငြိမ်မှုရှိသောစနစ်သည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ဒီယန္တရားကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဤလိုင်းများကို ဦး တည်နေသောဗွီဒီယိုတွင်သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း Vivo X50 Pro ကင်မရာတွင်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုစနစ်သည်မှန်ဘီလူးကိုသူ့ဟာသူလှည့်ပတ်သွားလာနိုင်သောလမ်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မကောင်းသောသွေးခုန်နှုန်းရှိလျှင်ပင်တည်မြဲနေရန်ပုဆိန်များသည်လှည့်သည်။
၎င်းစနစ်သည် terminal တစ်ခုတွင် embedded ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးကောင်းကျိုးရှိသည် သာ 4.5 မီလီမီတာ၏အထူ။ ရလဒ်? ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချက်အလက်များအရလက်ရှိတည်ရှိနေသောစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်လာသည်။ ထို့အပြင် Vivo က X300 Pro ၏ကင်မရာသည်မည်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မဆိုအရှက်တကွဲဖြစ်သည့်ဓာတ်ပုံများကိုရရှိရန် ၃၉ နှင့် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းအကြားအလင်း sensitivity ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အာရှထုတ်လုပ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဘာအံ့အားသင့်စေသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ terminal ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိဖို့စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်၊ Vivo X50 Pro ၏ကင်မရာသည်အလွန်မြင့်မားသောညွှန်ပြသည့်ကိရိယာ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » တရုတ် Android » Vivo X50 Pro ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကင်မရာတည်ငြိမ်မှုသည်ဤနည်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်
WhatsApp သည် Android beta ဗားရှင်းတွင် QR ကုဒ်များအားဖြင့်အဆက်အသွယ်များကိုခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
[ဗွီဒီယို] Galaxy Note10 + ကို Windows 10 PC နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း